Izindaba - Isimo sokuthuthuka kanye nesibikezelo sesimo sesigaba semakethe somkhakha we-inki
1. Ukubuka konke nokuhlukaniswa komkhakha we-inki
Uyinki into enoketshezi enezinhlayiya ze-pigment ezihlakazeke ngendlela efanayo ku-binder futhi ine-viscosity ethile. Kuyinto ebaluleke kakhulu ekuphrinteni. Esimemezelweni sanamuhla sokuthuthukiswa komnotho wekhabhoni ephansi kanye nokukhuthazwa kokuvikelwa kwemvelo okuluhlaza, ukukhiqizwa nokusetshenziswa kwama-inki okonga amandla nobungani bemvelo kuya ngokuya kuba ukuvumelana komkhakha wenkini nomkhakha wokuphrinta.
Isibopho senziwa ikakhulukazi ngama-resins ahlukahlukene kanye nama-solvents. Isetshenziswa njengesithwali sombala ukulungisa i-viscosity, uketshezi, ukoma nokudlulisa ukusebenza kukayinki, nokwenza uyinki womile, ulungise futhi wakhe ifilimu ebusweni bendawo engaphansi. I-pigment inquma umbala, amandla wokuthinta, i-chromaticity, ukumelana ne-solvent, ukumelana nokukhanya, nokumelana nokushisa kukayinki. Umenzeli osizayo yinani elincane lezinto ezisizayo ezingezwe ukwenza ngcono ukusebenza kukayinki nokulungisa ukuguquguquka kokuphrinta kukayinki ngesikhathi senqubo yokukhiqiza neyokuphrinta. Kunezinhlobo eziningi zikayinki, futhi izinhlobo ezahlukene zikayinki ziyehluka kakhulu ekwakhiweni nasekusebenzeni. Ngokuya ngezindlela ezahlukahlukene zokuphrinta, izinhlobo ze-solvent nezindlela zokomisa, ingahlukaniswa ngezigaba ezilandelayo:
Kuhlukaniswe ngefomethi yokuphrinta: uyinki wokudweba, uyinki we-flexo, uyinki wokuphrinta kwesikrini noyinki we-jet wokuphrinta, njll .;
Kuhlukaniswa ngohlobo lwe-solvent: i-benzophenone-based solvent ink, i-inki esuselwa ku-oyili, i-alcohol / ester solvent ink, i-inki esekwe emanzini kanye ne-inki engenawo umswakama;
Kuhlukaniswe ngendlela yokomisa: uyinki wokumisa okhubazekile, uyinki wokumisa okwe-oxidized, inki eyomisayo eshisayo, uyinki wokumisa i-ultraviolet (UV) namanye ama-inki omiswe.
Imboni ye-inki yazalwa ngemuva kwenguquko yokuqala yezimboni emazweni asentshonalanga futhi yathuthuka ngokushesha ngenxa yokuthuthukiswa kwezimboni zokuphrinta zamakhemikhali nezokupakisha. Kusukela ngeminyaka yama-1980, ngokuthuthuka komnotho womhlaba kanye nokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, ukukhishwa komkhakha wokukhiqiza inki womhlaba wonke kuqhubekile nokukhuphuka, kanye nokugxila embonini kukhuphuke kakhulu. Izinkampani zikayinki eziyishumi eziphezulu emhlabeni zibala ngaphezu kuka-70% wesabelo semakethe emhlabeni. I-United States, iChina, iJapane neJalimane sebengabakhiqizi nabathengi abakhulu bakayinki emhlabeni. Eminyakeni yamuva, ukukhishwa konyaka kukayinki kungamathani ayizigidi ezi-4.2 kuye kweziyi-4.5, okukhipha inki kwezwe lami kubanga cishe u-17% womkhiqizo oyinki ophelele emhlabeni. izwe lami selibe ngumkhiqizi wenkinki wesibili ngobukhulu emhlabeni.
2. Ukuhlukaniswa kwemakethe nokuhlaziywa kwemikhuba embonini ye-inki
Ukukhishwa konyaka kukayinki ezweni lami kukhule kusuka kumathani ayi-697,000 ngo-2015 kuya kumathani ayi-794,000 ngo-2019, ngezinga lokukhula lonyaka elibalelwa ku-3.3%. Eminyakeni eyishumi eyedlule, ikhwalithi nobungako bemikhiqizo yezinki yezwe lami ibe nezinguquko ezinkulu, kepha ukusetshenziswa komuntu ngamunye ezweni lami ngezinto eziphrintiwe kusekuncane kakhulu. Ngokuthuthuka okuqhubekayo komnotho wezwe lami, ukuthuthukiswa ngamandla kukayinki kusobala futhi. Ngokuzayo, ukuthuthukiswa komkhakha wezinki wezwe lami ngeke kukhulise imikhiqizo kuphela, kepha kuzobuye kunake kakhulu ukulungiswa kwesakhiwo somkhiqizo, ikakhulukazi ukukhulisa ukugxila kokukhiqiza, ukukhulisa ucwaningo nentuthuko, ukuthuthukisa okuqukethwe kwesayensi nobuchwepheshe, ikhwalithi yomkhiqizo nokuzinza komkhiqizo, futhi ikwenze uvumelane kangcono nemboni yanamuhla yokunyathelisa idinga i-multicolor, isivinini esikhulu, ukomisa okusheshayo, ukungangcolisi umoya nokusetshenziswa okuphansi.
Ngokombono wesakhiwo somkhiqizo, ngokusho kwezibalo ezifanele ezifana ne-China Ink Association kanye ne-Radiation Curing Professional Committee ye-China Photographic Society, ukukhishwa kwama-inks wokunyathelisa nge-offset ezweni lami ngonyaka we-2018 kube cishe no-36.0% wengu-inki wonke wasekhaya okukhiphayo. Umphumela ophelele wama-inki we-flexographic kanye ne-gravure (ama-inks we-liquid ikakhulukazi Izindawo zokufaka izicelo zenkampani zibalwa cishe ngama-42.8% womkhiqizo ophelele wenkinki yasekhaya, futhi ama-inki we-UV abalwa cishe nge-9.2% yomkhiqizo ophelele we-inki wasekhaya.
(1) Ukuhlaziywa kwemakethe ye-UV ink
Njengamanje, umkhakha omkhulu wokufaka isicelo weyinki we-UV wasekhaya ukuphrinta osikilidi abasezingeni eliphakeme, iwayini, imikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo kanye nokupakisha kwezimonyo, okubamba ngaphezu kwengxenye; okulandelayo ukuphrinta izimpawu zokuhweba ezahlukahlukene, izikweletu, njll .; okunye okunye okokusebenza okukhethekile noma izinhloso ezikhethekile Imikhiqizo, enjengamakhadi kazibuthe, amashidi epulasitiki neminye imikhiqizo, futhi ukuthambekela kwamashidi epulasitiki kusetshenziswa ubuchwepheshe bokuphrinta be-UV kukhula njalo.
Eminyakeni yamuva nje, ubuchwepheshe be-LED UV obelapha buvele kancane kancane, futhi kulindeleke ukuthi bube yibo ubuchwepheshe obujwayelekile bokulapha ngokuzayo. Uyinki uphulukiswa ngokukhanya kwe-LED, ububanzi bayo be-wavevel bumncane kakhulu (njengamanje i-wavelength eyodwa engama-365 ~ 395nm), ukukhanya kwe-LED kunempilo yenkonzo ende, ukusebenza kahle kwamandla aphezulu, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, nokukhanya kwe-LED kungavulwa kuvulwe futhi kuvalwe khona manjalo ngaphandle kokushisa kuqala , Imisebe yokushisa iphansi ngokwedlulele, ayikho i-ozone ekhiqizwayo, futhi iphephile, inobungani bemvelo futhi yonga amandla kakhulu kunesibani se-mercury esine-high-pressure esisetshenziswa ekwelapheni inki kwendabuko kwe-UV. Ngokusho kwe-ejensi yocwaningo emakethe i-Yole, isabelo semakethe se-UV global global in UV elapha imithombo yokukhanya sizokwenyuka sisuka ku-21% ngo-2015 siye kuma-52% ngo-2021, kanti ama-inki e-UV-LED anethemba elihle lokuthuthuka ngokuzayo.
Ngokombono wesakhiwo somkhiqizo, ngokususelwa ekusebenzeni okuhle kokulondolozwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo kwama-inki e-UV, ukukhishwa kwama-inks ezwe lami e-UV (kufaka phakathi ama-inki e-UV kanye nemaskhi ye-solder UV inks, njll.) Kube nokwanda kukonke inani lokukhishwa kukayinki ophelele wasekhaya. I-5.24% inyuke yaya ku-9.17% ngo-2018, ukukhula okusheshayo, futhi kulindeleke ukuthi kusazoba nendawo enkulu yokukhula ngokuzayo.